होम आइसोलेशनमा बस्ने संक्रमितले यस्ता आयुर्वेदिक औषधि सेवन सुझाब - Upabhokta Nepal
२०७८ साउन २० गते बुधवार |
होम आइसोलेशनमा बस्ने संक्रमितले यस्ता आयुर्वेदिक औषधि सेवन सुझाब
Reporter	काठमाडौं	वैशाख २३, २०७८
काठमाडौं, नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) का सक्रिय संक्रमितको संख्या ६६ हजार ३५२ छ । जसमध्ये धेरैजसो होम आइसोलेशनमा छन् । कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामीका लागि औषधिको विकास भइसकेको छैन ।
होम आइसोलेशनमा बस्नेहरु कोठामा सीमित हुँदा कसरी कोरोना मुक्त हुने भन्ने चिन्ताले धेरैजसोलाई सताइरहेको हुन्छ । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप बने पनि सबैको पहुँचमा पुगेको छैन । तसर्थ संक्रमितले लक्षण अनुसारको औषधि सेवन गर्दै आइरहेका छन् ।
होम आइसोलेशन वा आइसोलेसन वार्डमा बस्ने संक्रमितले घरकै भान्सामा पाइने आयुर्वेदिक जडीबुटी सेवन गरेमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्याय बताउँछन् ।
कतिपय व्यक्तिले आयुर्वेदिक औषधिले नै कोरोना निको पर्न सक्ने भनेर भ्रमसमेत फैलाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितले भान्सामा पाइने विभिन्न किसिमका जडीबुटीलाई मिलाएर सेवन गरेको खण्डमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भने बढाउन सक्ने डा.उपाध्यायको भनाइ छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीरमा विकास भएपछि हत्तपत्त शरीरमा भाइरसहरूले आक्रमण गर्न सक्दैनन् । कोरोना महामारीको बेलामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्रमशः विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसले आयुर्वेद औषधिलाई बुझ्छन् । तर, आयुर्वेदको ८० प्रतिशत भाग स्वस्थ जीवनशैली हो । आयुर्वेदको अर्थ पनि जीवन विज्ञान हो । महानिर्देशक डा. उपाध्यायका अनुसार एकान्तवास वा आइसोलेशनमा बस्नेहरुले यस्तो जीवनशैली अपनाएका कोरोना संक्रमण मुक्त हुनबाट सहयोग गर्ने छ–
— मनलाई शान्त बताउनु पर्छ । मन शान्त बनाउनका लागि बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रणायाम गरौं । लामो सास लिने, जतिसक्दो रोक्ने, त्यसपछि सास फाल्ने क्रम कम्तीमा १५ मिनेट गर्नुपर्छ ।
— कोरोना पोजेटिभ भएकाहरुले दुई घण्टाको अन्तरमा ५ देखि १० मिनेट प्राणायाम गर्नुपर्छ । शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा बढाउन पनि प्राणायाम अभ्यासले सहयोग गर्छ । कोभिड मुक्त भएर आइसियू, भेन्टिलेटरबाट निस्किएकाहरुले पनि यो गर्दा राम्रो हुन्छ ।
— प्राणायाम गर्दा म कोरोना मुक्त हुँदैछु÷ठिक हुँदैछ । मेरो छाती एकदम ठिक छ भन्दै आफैलाई मोटिभेट गर्ने ।
— १ लिटर पानीमा ३÷४ वटा पुदिना र तुलसीको पात र ३ देखि ५ ग्राम बेसार हालेर उमालेर त्यसको बाफ ५ देखि १० मिनेटसम्म दिनको एक वा दुई पटकसम्म लिने ।
— झोल कुरा प्रशस्त खाने, दुई लिटरमा पानीमा आधा ग्राम पिपला राख्ने, सुठो, अदुवा, तुलसीका पाँच वटा पातलाई थिचेर पानीमा उमालेपछि पिउने ।
— मनतातो पानीमा नून हालेर दिनको ४ देखि ६ पटकसम्म कुल्ला गर्ने ।
— सुख्खा खोकी वा घाँटी खसखस भएको खण्डमा १ ग्राम ल्वाङ्गको धूलोलाई मह वा मिश्रीसँग मिसाएर २ देखि ३ पटक सेवन गर्ने ।
— मुगको दाल बनाएर प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्ने । दाल, भात, तरकारी खाने तर, भातभन्दा बढी गहुँको रोटीलाई खानामा समावेस गर्ने ।
— अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि फलफुल प्रशस्तमात्रामा खाने, भिटाभिन सी प्राप्त गर्नका लागि अमला सेवन गर्ने, कागती निचोरेर पानी राखेर नियमित रुपमा पिउने ।
— चित्रक हरितकी १ चम्चा (३ देखि ६) ग्राम बिहान बेलुका मनतातो पानी वा मनतातो दूधसँग सेवन गर्र्ने ।
— यष्टीमुध चूर्ण १ चम्चा (२ दुई देखि ४) ग्राम मनतातो पानीसँग दिनको दुई पटक सेवन गर्ने ।
— महासुदर्शन चूर्ण (३ देखि ६) ग्राम वा काढा पकाएर ४० एमएल बिहान बेलुका, बिशेष गरेर ज्वरो आएकोमा पिउने ।
जथाभावी आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या पनि हुन सक्छ । धेरै मानिसलाई आयुर्वेदिक औषधि जति सेवन गरे पनि समस्या हुँदैन भन्ने एक किसिमको भ्रम छ ।
काठको औषधि बाहेक रस औषधिको जथाभावी सेवन गर्दा मिर्गौला, मुटु, कलेजो लगायतका अंगहरुलाई नोक्सान पु¥याउन सक्ने भएकाले विषेशज्ञको सल्लाह बेगर त्यस्ता औषधि सेवन गर्नु हुँदैन ।
२०७८ वैशाख २३ गते बिहीवार १३:३१ बजे प्रकाशित
कोटेश्वरमा गेस्ट हाउसको ब्यानरमा यौनधन्दा
सांसदसहित ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँमा २७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप : तालिम, सेमिनार र बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने
उपत्यकाको अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामी भर्ना हुनेको सङ्ख्यामा ह्वात्तै बृद्धि
बस्ती जोगाउन सरकारले सहयोग नगरेको सिन्धुपाल्चोक बाढी प्रभावितको गुनासो
बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल खुलाउने तयारी
कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिममा बालबालिका, कस्ता हुन्छन् लक्षण ?
३१८० वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा
बौद्धमा बोराभित्र विभत्स तरिकाले हत्यापछि फ्याँकिए शव भेटियो
तत्काल मनसुन कमजोर हुने अवस्था छैन: मौसमविद्, सचेत रहन आग्रह
व्यवसायीको मनोमानी, समस्यामा परेर काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रुसँग तीन गुणासम्म बढी भाडा असुली